Call Point IP 212 45 - umlilo siqu endlini
Ngokuphindaphindiwe waqinisekisa ngokuhamba ucwaningo eziningi: ubuthongo abantu ungazizwa yiphunga lentuthu. Ngokwe-Ministry of Emergency Izimo izibalo adabukisayo, iningi labantu abafa umlilo ku-Abimeleki ngephupho. Yekela ukuthi iba imbangela yomlilo. Ayeka esandleni usikilidi ingalali (mayelana 80% azo zonke lababuleweyo umlilo), esithandweni somlilo okuyiphutha, a wiring isekhethi (okuyinto namanje azifinyelelanga ukufaka esikhundleni). kungaba eziningi Izizathu, kodwa umphumela-ke ngeshwa, eyodwa. Call Point IP 212 45 - idivayisi elikuvumela ukuvikela abathandekayo kusukela isici umlilo, kulula ukuyisebenzisa futhi ezingaphezu kuka okungabizi.
Ubungozi imikhiqizo womuntu amandla omlilo
Phakathi amandla omlilo, namachibi of organic compounds ezikuyo umoya-mpilo ne-carbon dioxide excretion CO 2 ne-carbon monoxide CO. Ngokushesha ukucacisa, SP 212 45 Kuphendvula ngokulinganayo ngempumelelo kukho kokubili lezi zakhi.
Ngo omlilo evamile hydrocarbon kwakhiwa ajwayelekile kithi carbon dioxide CO 2. okuqukethwe Isilinganiso emoyeni ka 0.03 ... 0.05%. Ngezinye evutha endaweni ebiyelwe umoya abampofu, emakamu yayo kwandisa ngokushesha. A ephefumula umoya nge 30% CO 2 okungenani ihora - umthamo ebulalayo umuntu omdala onempilo.
Okuningi esikhohlisayo -carbon monoxide CO, ngokuvamile eyaziwa ngokuthi i-carbon monoxide. Anakho kwakhiwa eyodwa kuphela-carbon-athomu unamathele, is lapho amandla omlilo senzeka nge nokuntuleka nomoya-mpilo. Futhi izimo umlilo okwenzeka ekamelweni avaliwe, kuba yinto evamile. Ngakho, emoyeni imuncwe lokuhlushwa okungenani 0.4% siholela ekufeni ngaphakathi esingaphansi kwehora, emakamu angu nokuningi ubulala cishe ngokushesha.
Kodwa lokhu akulona lonke "yokuthakwa kwamakhemikhali", okuyinto ekhona esakhiweni esivuthayo. Imikhiqizo amandla omlilo kwezinye polymers ukubunjwa yayo - a real izikhali zamakhemikhali.
Incazelo 45 SP kudivayisi 212
Ukuma idivayisi kancane like a flying esosweni njengabafokazi. Made ephezulu grade plastic. I ububanzi we disc lube ngu-100 mm, ubude - 60 mm.
Idetector 45 SP 212 imisebenzi isimiso kwalungiswa izinkunga zokubona ray ukukhanya njengoba idlule medium-optical. Ukubukeka intuthu esikhaleni emoyeni, umule kubangela ushintsho izakhiwo optical umkhathi. A inzwa ebucayi enza lolu shintsho futhi kuhlanganisa i-alamu.
Ngaphezu kwalokho, i-SP 212 45 Ngeke ize abaphazamisa abanikazi ekuphenduleni izinguquko emoyeni umswakama (ukuhwamuka kusuka ngeketela abilayo). izakhi photosensitive zilungiswa ukuze aphendule nomusi emoyeni ngokweqile, CO CO 2.
Trigger umtshina iqoqo izibani futhi umsindo. Ngaphezu kwalokho, isiginali umsindo kuhloswe ukuba ibakhathaze esiphezulu, ngakho indiva intuthu isakhiwo 212 ne SP 45 ingavuli. Ngisho nabantu lilele ubuthongo obumnandi futhi (ngisho ngenkathi didekile) Siyaqiniseka ukuthi sengivuswa amasignali input.
Ukuthengwa lokhu noma idivayisi efanayo namuhla akuyona inkinga. Ungathenga ke cishe kunoma yisiphi isitolo electronics. Popular eminyakeni yamuva shopping inthanethi futhi azizange zisinde lo mkhiqizo.
Lapho uthenga, hlola kudivayisi. Ukuze ukuhlole idetector, ngokukhethekile fumigate ngayo intuthu. Enough maphakathi iyunithi (kukhona imbobo encane), ubeke stem lokuvungula esibayeni noma ezinye izinto ezincane. umzimba Foreign izodlala indima nomusi kudivayisi azosebenza.
SP 212 45 iphelela ku ibhethri 9V - "umqhele". Kufanele sibheke usuku lokuphelelwa yisikhathi sebhetri, hhayi ukuba ukushintsha ngokushesha.
Kufakiwe umtshina ophahleni. Ekuqaleni, ngezikulufo ezimbili self-u- (uma uphahla kuyinto ngokhuni) noma encane dowel-izinzipho enamathiselwe ipuleti ekhethekile. Khona-ke, nalokhu u kancane agxishiwe fixed yidivayisi ngokwaso ithuba kancane emzimbeni ngo-30 °. LED eshaywa esisodwa mayelana 40 ... imizuzwana 50 ubonisa ukuthi usuvele bangaphansi isivikelo ezizimele umlilo umtshina.
Ayikho kokuhlupheka umninikhaya umtshina intuthu SP 212 45 Akawukhululi. Kwake kwathi ngo-3 izinyanga izoqala ukunyathelisa "Beep" iDemo ngomzuzu ngaphandle kwesizathu. Ngakho, insimbi ubonisa ukuthi amandla supply idinga ukushintshwa.
Noma ubani oke waba ngokuzimela ushintshe amabhethri ku-TV, uzokwazi ukuyiguqula umtshina. Lapho esikhundleni ibhethri Kunconywa kahle lizahlambulula Ezansi idivayisi (reshotochku) nge umoya onomfutho noma inqubo cleaner.
Autonomous umlilo alamu ngeke abe engadingekile emkhayeni, ikakhulukazi abanezingane ezincane noma nezihlobo ezikhulile.
Ukufakwa kanye recoding izingidi: bani ukuthemba?
Inqubo odongeni isikhunta nangesikhunta? izindlela ezisebenzayo ulwe isikhunta futhi ukhunta
Ngehele Zaporozhye - odinga ukukwazi labo namanje ukuphila ngaphandle Amabha
Igobolondo G9: Incazelo
Ukuphepha Fire kwezakhiwo kanjalo nezinhlaka Basics
Dream "i-rat", kanye lokho ukuphupha rat emhlophe.
Yikuphi lihlotshaniswa bezibona Russia ezizweni zonke emhlabeni
Yiziphi amagugu kwabesifazane eLvov
Rest in Odessa: Izibuyekezo
Indlela Sinqanda ukufinyelela emininingwaneni kukhasi "VKontakte"? Kulula!
Theory eyisisekelo umsuka isimo
Chief, United Fleet Isoroku Yamamoto biography
Amavithamini 'Triovite' - yokusetshenziswa